Apple Arcade Hadda Waxaa Lagu Heli Karaa Tijaabo Bilaash Ah Oo Bil Ah | Wararka IPhone
Apple Arcade wuxuu ahaa mid ka mid ah riwaayadaha uu Apple ka tagay WWDC-kii ugu dambeeyay ee 2019 taasna waxay qaadatay mudnaan dheeri ah intii lagu gudajiray Kulankii Sebtember 10. Apple Arcade ayaa hogaaminaya oo hadda si buuxda looga heli karaa iPhone-ka, waxaan ku tusinaynaa "Netflix ee ciyaaraha fiidiyowga" cusub ee Apple ay billowday oo ah 4,99 euro bishii. Shaki la'aan barnaamijkan cusubi waa mid ka mid ah adeegyada cusub ee ay shirkadda Cupertino ku rajo weyn tahay inay si buuxda noogu xirnaato taasna waxay ka timaaddaa gacanta Apple TV +, oo ah adeeg kale laakiin kan ujeedkiisu yahay inuu siiyo tartan buuxa Netflix.
Ma joojin karo kugula talinta inaad istaagto CADADKA kaas oo lagu helayo dhammaan macluumaadka ku saabsan Apple Arcade iyo wararka ay ku jirto, iyo waliba sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee loo shaqaleysiiyo oo looga dhigo mid ka shaqeeya iPhone-kaaga. Sidaan soo sheegnay, hada Apple Arcade wuxuu kaliya la jaan qaadayaa iPhone-ka, inkasta oo dhawaan laga heli doono Mac-gaaga, iPad-ka, iPod-ka iyo dabcan Apple TV. Adeeggu wuxuu ku kacayaa 4,99 euro bishiiba, hase yeeshee waxaad codsan kartaa tijaabo bilaash ah bil dhan.
Sida loo helo Apple Arcade bilaash
Si tan loo sameeyo waa inaad tagtaa macruufka App Store, hase yeeshee waxay leedahay xeelad. Si aad ugu raaxeysato Apple Arcade waa inaad ku rakibtaa iOS 13, nooca nidaamka hawlgalka waxaa la sii dayn doonaa Sebtember 19 markay tahay 19:00 fiidnimo. Kuweena horey u tijaabiyay nidaamka cusub ee shirkada ay ku shaqeyso ama Haddii aad horey ugu cusbooneysiisay si rasmi ah oo rasmi ah iOS 13 ama iPadOS, kuwani waa tallaabooyinka:
Gali macruufka App Store
Guji qaybta "Arcade" qaybta hoose ee App App-ka iOS
Dhagsii «Isku day si bilaash ah»
Tijaabada hal bil ee isticmaalka Apple Arcade ayaa si toos ah u bilaaban doonta
Waa in la ogaadaa in tijaabadani ay tahay mid bilaash ah. Si aad uga baxdo Apple Arcade Waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan tagno Settings> Dhagsii Aqoonsigeena Apple> Diiwaangelinta oo aan joojinno muddada tijaabada Apple Arcade
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Arcade hadda waxaa lagu heli karaa tijaabo bilaash ah oo bil ah
Waxay sii daayeen buug-gacmeed aan aniga iga codsaneyn haba yaraatee ... Waxaan rajo weyn ka qabay in horumariyeyaashu ay wax yar ka sii shaqeyn doonaan ...
Waxaa iga maqan buugga tayada leh!
Xarkaha birlabta 'Magnetic straps' waxay sababi karaan faragelin ku socota kambaska Apple Watch